M/wayne Faroole oo cambaareeyay weerarka Soomaliland ay kusoo qaaday Buuhoodle,isagoona qaswadayaal ku tilmaamay maamulka Khaatumo. – Radio Daljir
M/wayne Faroole oo cambaareeyay weerarka Soomaliland ay kusoo qaaday Buuhoodle,isagoona qaswadayaal ku tilmaamay maamulka Khaatumo.
Garowe,Feb 8 -Madaxwaynaaha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo maanta ka hadlayay munsaabad kadhacday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa nasiib darro ku tilmaamay weerarkii ay ciidamada Somaliland kusoo qaadeen deegaano ka mid ah degmada Buuhoodle oo ay ugu dambeysay dagaalkii saaka ka kadhacay duleedka Buuhoodle.
Madaxwaynaha ayaa ku tilmaamay wax nasiib darro ah in maamulka Somaliland uu soo weeraro goobo ay ku suganyihiin dad reer miyi ah oo xoolo dhaqato ah.
\_”Waxaa nasiib darro ah in xukuumadda Somaliland ay weerar qaaban kusoo qaado magaalada Buuhoodle bishii January 15keeda,wararka sida ay nagu soo gaarayaana saaka mar kale ay soo weerartay,iyadoo ciidamadeeda ay fadhiyaan goobihii miyiga ee xoolaha biyaha ka cabayeen\_”ayuu yiri madaxwaynaha Puntland oo intaasi raaciyay xiligaan in la joogo dhibaatada Soomaaliya in lasoo afjaro oo uu maamulka Somaliland weeraro kusoo qaado deegaanada Buuhoodle.
Madaxwaynaha ayaa ugu baaqay maamulka Somaliland inuu ciidankiisa dib ugu celiyo goobihii ay fadhiyeen 15kii January ka hor,isagoona uga digay inay dagaal sokeeye ka dhalato talaabooyinka ay Somaliland ka wado deegaanKa Buuhoodle.
\_”Kuwa iyagu meel aan waxba ku jiri wax ka raadinaya ama hadba dhinac usoconaya oo raadinaya in hadba geedi socodka Soomaaliyeed dhiig ku raadiyaan oo maalintii Buuhoodle lasoo weerarayay ku sugnaa,dabadeedna Itoobiya u cararay waxaan u sheegaynaa sida aad wax ku raadinaysaan waxba ku heli maysaan\_”ayuu sii raaciay madaxwayne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Madaxwayne Faroole ayaa sheegay dowladda Itoobiya oo ka shaqaynaysay inaysan isku dhicin Somaliland iyo Puntland inay runta u sheegto madaxwaynaha Somaliland oo xiligaan ku sugan dalka Itoobiya,ayna waxba ka dhagaysan dad uu ku tilmaamay inay yihiin qaswadayaal.
\_”Aduunka waqtigaan xaadirka ah ee maanta la joogo oo anagu ka hadlayno dimuqraadiyeen qof walba xaq buu u leeyahay ayihiisa inuu ka taliyo,magaalada Laascaanood haysashadeedu waa waxa sabab u ah oo kuwo siyaasiyiin isku sheegaya ay rabaan inay kaga faa\_’iidaystaan qalalaaso siyaadadeed inay mar dambe xukun meel kaga helaan \_”
Madaxwaynaha ayaa isagoo hadalkiisa sii wata waxaa uu ugu baaqay maamulka Somaliland inuu ciidamadiisa kala baxo magaalada Laascaanood kahor inta uusan furmin shirka London ee la filayo inuu qabsoomo.
\_”Waxaan ugu yeeraynaa dowladda Somaliland inay magaalada Laascaanood si degdeg ah uga baxdo oo aysan ka qaybgalin shirka London ciidamadeeda oo ku sugan magaalada Laascaaood\_’ayuu yiri madaxwayne Faroole,isagoo hadalkiisa siiwata ayaa waxaa uu sheegay beesha caalamka inaysan shirka London ugu yeerin dad Soomaaliyeed oo nabadda kasoo horjeeda.
Hadalka madaxwayne Faroole ayaa waxaa uu soo baxayaa xilli ay saaka dagaallo ka dhaceen deegaano ka mid ah degmada Buuhoodle ee gobolka Cayn.